Jawaar Mohaammad: 'Masaraa mootummaa keessatti Oromoo arrabsuun, abaaruun ummata dallansiiseera' - BBC News Afaan Oromoo
Jawaar Mohaammad: 'Masaraa mootummaa keessatti Oromoo arrabsuun, abaaruun ummata dallansiiseera'
Turtii Jawaar Mahaammad BBC waliin taasise
Jawaar Mohaammad Daareektara dhaabbata midiyaa OMN fi Roogeessii Oromoo haala mudate jedhamee ilaalchisee BBC waliin gaaffiifi deebii taasiseera.
Gaaffiifi deebii BBC waliin godheen haala itti aanuun qindeessine dubbifadhaa:
BBC: Ibsa polisiin kennerratti maal jetta?
Jawaar: Ni kijiba. Sagalee isaanii waraabnee maxxansinee jirra. Kan hafes ni maxxansina.
Kaleessa galgala sa'aatii 6:20'tti konkolaataan lama balbala keenyarratti dhaabbate. Achiis ijoollee 'security'dhaan bayaa, meeshaa keessan fudhadhaatii deemaa jedhaniin.
Ijoolleen ammoo garam deemna? jennaan, leenjii deemtu jedhaman.
Isaanis halkan kanaan akkamitti dhiifnee deemna? Eenyutu bakka keenya bu'a? jennaan. Kuni wanti isin galchu hinjiru. Jawaar osoo hin dhagahiin bahaa jedhaman.
Ani wayita san gubbaa rafaan ture. Isaanis kun sirrii miti jechuun ajajaa waliigalaatti himani.
BBC: Ajajaan Komaandar Indaalee jedhaman kun eenyu?
Jawaar: Itti-gaafatamaa eegumsa VIPti. Poolisii Federaalaa jala jira. Yeroo kaanis ijoolleef ajajaa fi qajeelfama kan kennu isa.
Ijoolleen sirriitti beeku, bilbila isaas qabu. Dorsisuu eegallaanis waraabani.
San booda na kaasanii, deebiseen bilbileef. Waanuma isaanitti hime sana hime.
Gaaffiidhaan muddinaan 'Ani gooftaa koo ani iyyeessaa waanin beeku hinqabu. Reefuma ijoollee kan asii baasi ajajni jedhu natti kenname malee, waanin beeku hin qabu naan jedhe.
Itti-aansee Komishinara Poolisiif bilbillaan hin kaafne. Ittaanaasaa Malaakuu Faantaa nama biraa dubbisnaan ajajni eegdonni achii akka ka'an murtaa'uusaa mirkaneesse.
Sababa himuu hin dandeenye.
Yeroo kana shakkiin nu keessa waan galeef gara of eeguutti sochoone. Paatirooliin sadiifi afur tahu dhufee nu marsuu eegale.
Kuni qabatamaan kan godhame, ragaa guutuu kan lafaa qabnudha. Kana hin goone jedhanii sobuun, shira yaadamee ture haaluudhaaf akka ta'ettin fudhadha malee, dhugaarraa kan fagaatedha.
BBC: Ajajni eenyurraa dhufe jedhan?
Jawaar: Komaandar Indaale wayitan gaafadhu, hogganaasaa nama Yishaaq jedhamurraa ajajni akka dhufef natti hime. Yisihaaq kun daarektaroota keessaa nama tokko.
Yishaaq kana bilbilee argachuu dadhabnaan, Ittaanaa Komishinaraa Malaakuu Fantaa namoota biraatiin bilbillee dubbifnaan, ajajni kun gubbaadhaa dhufuudha kan nutti hime.
Gubbaa kam? jennaan, nuuf baasuu hin dandeenye.
Wanni uummanni keenya hubachuu qabu, poolisoota waliin hariiroo gaarii qabna. Yeroo baanuufi gallu, ibsa kenninaafi odeeffannoo nuu kennu.
Yeroo jijjiiramni kamuu godhamu anaaf, yookaan an argamuu baadhe itti gaafatamaa 'security' mooraa jiruuf bilbiluudhaan wanta jiru kennu.
Kaleessa garuu osoo natti hin himiin, osoo ijoollee asi jiranittis hinhimiin dhufanii ijoollee kaasuudhaaf yaalan.
Kan baayyee nu shakkisiisee ammoo osoo inni hindhagayiin bahaa jechuun sun, osoon ani rafee jiru ijoollee baasuudhaaf ture.
Boodarra akka dhageenyeetti ammoo erga baasaniin booda, durriyyoota magaalaatiin tarkaanfiin akka fudhatamuuf qophaa'ee ture.
Akkuma yaadatamu dhiheenya kana naannoo Boolee Bulbulaatti rakkootu ture.
Rakkoo sana baballachiisanii gama dorriiyyootaatiin tarkaanfii anaafi manarratti fudhachiisuuf qophaa'aa akka turan amannee jirra.
BBC: Wayita eegdota kana siif ramadan waliigalteen keessan maal ture? Maal waliin haasoftanii ture?
Jawaara: Akkuman dhufeen guyyaan dhuferraa kaasee humna sadiirraati kan naaf ramadame. Poolisii Oromiyaa, Poolisii Federaalaafirraafi Tajaajila Nageenyaafi Odeeffannoo [intelligence] kan jedhamurraa ture kan naaf ramadame.
Humna sadan kanatu na birattti ramadame. Yeroo booddee Poolisii Oromiyaa kaasanii warrii Dahininnatiifi Federaalaatu na biratti hafe.
Waliigalteen, irra deebiyanii komishinaroonni akkasumas itti-gaafatamtoonni damee tikaatiis aggaammiin guddaan waan sirra jiruuf humni poolisii si bira jiraachuu qaba naan jedhan.
Innumaattu yeroo tokkotti ani sekuuriitii [eegdota] dhuunfaan godhadhaa yoon isin rakkisuu baadhe jedhee gaafannaan duuneetu argamna jedhan.
Yoo rakkoon tokko uumame nutu itti gaafatama jedhanii poolisii kana kan as kaa'an.
Amma garuu ni kaafna, kanaaf kaafnas kan jedhu yeroo tokkollee odeeffannoo nuuf hin kennine. Poolis komiishinaricha wajjin yeroo baayyee waliin haasofna.
Warra Dahininatii waliin yeroo hunda waliin haasofna. Garuu gaafuma tokko akka kaasan, maaliif akka kaasan naaf himanii hin beekan. Ijoollee as jiranittis [eegdotattis] himanii hin beekan.
BBC: Doorsiisni paarlaamarratti ture manatti ce'ee jira jetteetta. Haasawa isaan kaleessa taasisan waliin walqabata jettee amantamoo? Atiifi Ministirri Muummee Abiy yeroo dhumaatiif kan wal argitan yoom?
Jawaar: Haasawaan ministira muummichaa ifa ture. Miidiyaan isaan jedhan kam akka ta'e afaanuma miidiyaawwan dubbataniin ture kan dubbataa turan.
Namni miidiyaa bulchu, lammummaa biyya alaa qabus, ana akka ta'e namni beeka. Ifa ture.
Doorsiisni sun doorsisa ministira muumichaa tokkorraa hin eegamne, keessattuu ammoo nama akka obboleessaatti, akka sabaatti waliin jirru, nama yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turrerraa hin eegamne waan ta'eef baayyeen rifadhe. Baayyeen yaadda'e.
Wanta akkasii sana dubbachuun wanti tokko kan narra ga'u osoo taate, osoo innuu keessa jiraachuu baatee qubni gara isaatti akeekama kan jedhu, waahellani isaatti, jaallan isaa paartii isaa keessa jiranitti, jaarsolii paartii isaaniitti himaan ture.
Barruunis deebiseen ture. Haasawaan isaa kallattiidhaan walqabataa kan jedhu wantonni mul'isa jiru.
Tokkoffaan guyyaa doorsifni kun godhametti galgala yaaliin sun godhamuun waa malee natti hin fakkaatu.
Poolisoonni as jiranis, jechuun warri as dhufes ajajoonni poolisii, komishinaroonnis waa argan malee tarkaanfii akkasii fudhatan jedhee amanuudhaaf na rakkisa.
Keessa kan hin jiraanne yoo ta'e ministirri muummichaa kan ibsa kennu ta'a.
Ani akka kiyyatti garuu ummannis akka ilaalaa jirutti haasawaan isaa, doorsifni isaatiifi tarkaanfiin Poolisiin Federaalaa fudhachuudhaaf yaale waan walqabatu natti fakkaata.
Gaaffii ministira muummichaa waliin kan wal agarre jedhurratti, gaafa paartileen Oromoo walitti fidnee Gaaddisa Hoggansa Oromoo dhaabnedha. Sanii as wal hin agarre.
BBC: Erga ati halkan wanta kana himtee booda mormiin magaalota gara garaatti adeemsifamaa jira. Namoonnis rasaasaan dhahaman kan jedhu gabaasaaleen ni jiru. Dhaamsa maalii qabda kana irratti?
Kana qofaa miti ummata kan dallansiise. Ummanni keenya garaan bilchaataa jira. Erga jijjiiramni kun dhufee gaaffiin isaa hin deebineef.
Gaaffiin isaa deebiyuun hafee wantota madaa isaa tutuqqan, mootota kaleessa isa gabroomsaa turan, isa dhiitaa turan, isa fixaa turan, harkaafi harmasaa muraa turan faarsuun mufii uumeera.
Siidaan qabsaa'ota Qeerroo, siidaan qabsaa'ota dhugaa, qabsaa'ota dhugaafi dimokiraasii, tokkichi osoo hin dhaabbatiin, madaan isaanii osoo hin qooriin awwaala isaaniitiiirratti yaadannoon osoo hoomaa hin godhamiin mootota nama fixaa turaniif yaadannoon godhamuun kun ummata keenya keessatti haarii guddaa uumee jira.
Masaraa mootummaa keessatti ummata Oromoo arrabsuun, abaaruun ummata keenya dallansiisee jira.
Akkasumas, ejjennoon ministira muummee deemaa jiru kan faallaa ejjennoo qabsoo Oromoo ta'e, kan Sirna Federaalizimii mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu sarbu kun, ummata biratti falmii guddaa, komii guddaa uumee jira.
Dhimma kana irratti ani barreessaa turuun ni beekama. Kana ammoo ukkaamsuudhaaf, doorsisuudhaaf tarkaanfiin kun anas callisiisuudhaaf akka ta'etti ummanni kan fudhatee jiru.
Kanaaf ummanni anaafi OMNtiif osoo hin ta'iin mirgaafi dantaa isaa kan sarbamaa jiru, kan gaaga'amaa jiru, bu'aa aarsaafi wareegama isaa balaa irratti aggaamamee jiru kana ofirraa ittisuudhaaf tarkaanfii fudhataa jira.
Ergaa ani qabu, qabsoo isaa akkuma duriitti nagaan, qabeenya mootummaafi kan dhuunfaa osoo hin barbadeessiin, qaamota nageenyaan osoo walitti hin bu'iin, sabaafi sab-lammii isaan keessa jiran waliin osoo walitti hin bu'iin, qabsoo nagaa, qabsoo mirgaa naamuusaafi tokkummaa qabuun tooftaadhaan dabaalameen akka gaggeessan.
Kanarrattimmoo, mootummaannis mirga ummataa waan ta'eef tarkaanfii humnaarraa akka of-qusatuufi dhimmoota ummata keessa jiraniifi haala amma jiran kanas ummata tasgabbeessuu qaba.
Ummataaf wabii kennuudhaaf, hoggansi mootummaa kan Federaalarra jirus, kan naannoorra jirus dhokachuu dhiisuudhaan gadi bahee ummata isaa waliin akka haasa'u.
Keessattuu, hoggansi ODP ummata keenya hanga yoomiittiyyu dheessuu hin danda'u. Kun gaaffii murteessaadha. Ummata keessan hin dheessiinaa.
Ummata keessan hin ajjeesiina. Gadi bahaa waliin mariyadhaatii, hayyuu keessan wajjin, hoggana wajjin gadi bahaa rakkoo uumame furree ce'umsa adiidarraa bahe kana daandiitti haa deebifnun jedha.
Viidiyoo, Dhimma eegdotaa irratti turtii Jawaar Mahaammad BBC waliin taasise, Turtii 8,06